Raacii ugu Horeeyay ee Wufuuda iyo Madaxda DDSI ee Shirka Sheraton Hotel AA oo Maanta Ka Ambabaxay Garaad Wii-waal Airport - Cakaara News
Raacii ugu Horeeyay ee Wufuuda iyo Madaxda DDSI ee Shirka Sheraton Hotel AA oo Maanta Ka Ambabaxay Garaad Wii-waal Airport
Jigjiga(CakaaraNews) Jimce Sept 06,2013.Waxaa Maanta ka duulay garoonka Diyaaradaha caalamiga ah ee Garaad Wiil-waal International Airport Qaybtii ugu horaysay Dhanka Duulimaadka Hawada ee ka ambabaxda magaalada Jigjiga kuwaasoo ka koobnaa Madaxda xafiisyada,Gudoomiyayaasha Gobolada,ganacsatada,Qurbajoog iyo Odoyaal-dhaqameedka DDSI.
Sidoo kale Beri ayaa lafilayaa in Raacii labaad oo ay ku jiraan Masuuliyiinta ugu saraysa Xukuumada DDSI ay Beri wufuud ay ku jiraan ka ambabaxaan Garoonka Diyaaradaha garaad Wiilwaal.
Dhanka kale madaxweynaha DDSI Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa Beri ka soo ambabixi Doona Dubai oo uu Hawlo-shaqo oo la xidhiidhay Maalgashiga,Hantiilayaasha iyo Jaaliyada Imaaraadka ugu hakaday ka dib markii uu so dhamaystay Booqashadii Aqoonkororsiga iyo Xidhiidhka Iskaashiga Dhanka Bariiska ee uu ugu Tegay Cariga Shiinaha kuwaasoo Guul iyo isafgarad ku soo dhamaaday.
Kooxaha fanka,Hidaha iyo Dhaqanka DDSI,Qaybaha Bulshada iyo Abwaanada DDSI ayaa iyaguna ka mid ah Dadka ka qaybgalaya Kulanka Gogolxaadhka Hidar 29 ee ka dhici doona Magaalada Addis-ababa gaar ahaan Hotel-Sheraton iyadoona xafladan lagu muujinayo isbedelada iyo Kobaca Dhaqaaleee sida xawliga ah uga dhaqangalay DDSI Qiime gaara iyo Qadarin Maamuusna la siiyay Dhaqanka Soomaalida. Ujeedada Wufuuda ka ambabaxaysa Magaalda Jigjiga ayaa ku wajahan ka qaybgalka Shirka Qaran ee loogu gogolxaadhayo Xuska maalinta Midnimada iyo walaalnimada Qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya Hidhar 29 oo ka dhici doona sanadkan Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Madaxweynaha DDSI ayaa ka soo jeedin doona Kulankan Heer qaran oo ay ka soo qaybgalayaan raysalwasaaraha DFI,madaxda DFI iyo Deegaanada,Diplomaasiyiinta iyo Safaaradaha caalamka,maalqabeenada Addis-ababa warbixin taariikhi ah oo soo koobaysa Dhamaanba Sooyaalkii-taariikheed ee Deegaanka iyo Tabihii loo maray Isbedelada Horumarineed,N/galyo iyo maamul Suuban ee lagu talaabsaday 3dii sano ee ugu danbaysay halka la wada naawilayo Sidii aqoon iyo Khibrad looga qaadan lahaa Xukuumada DDSI.